Igu waallo: Awoodaha dhuumaalaysta – Kaasho Maanka
Waraysigii dabayl wayne iyo bawdya wayne
Haku fakarin cida aan ahay inaad waqti ku lumiso, waxaan kusiin doonaa, wax waliba . Waqtigaygu waa kaaga. Sida aaadan u garanayn meesha aan joogo iyo maqaamka aan sito, ayaanan u aqoon aniguba. Horta yaan ahay?
Maahi muuqaalka uu maankaagu ii ekaysiinayo. Hana isku dayin inaad miisaanka culayskayga aad micbaarato, aan isku kaa suureeyo anigu’e ha iga dagdagin. Waxba ma qabto, saamayn toosanna kuguma lihi, se dabinadaydaad ku dul meeraysataa. Horta doqonsanidee?
Lama hayo cid caddayn karta joogistayda, mana jirto meel aanan joogin “Waligaaba yay isku kaa qaban”. Muqaalka dushaydu macnayaal badan bay maskaxdaada ku dhalinayaan, gardaradaaduna waxa ay ku gaarsiisay adoonan aqoon ii lahayn inaad i suuraystid. Horta indha adkidee?
Garan maayo aniga iyo adigaba waxa iskaaya baday, se faduushaadaan u badinaya inay fadhigayga iigu timid. Waan ku arkaa oo beeno badan baad iitiirisaa, oo waalidaadu waa mid aan dabiib lahayn. Waxaad qoorta gashatay waxaanan anigu shaqo ku lahayn oo aad iigu tiraabta waliba, oo muskaad gashaba dhugmadaadu waa mid aniga igu soo foogan. Horta falanidee?
Waxaa cajiib ah inaad wax walba adoon i arag igala tashato, deedna maskaxdaada gudhani ay iyadu kuu mala’ awasho inaan anigu kuu soo jawabay. Waxaan qoslaa marka aad dibnaha qaniinto oo aad indho aad moodo basal in lagu cuudshay igu soo eegto, deedna aad jabkaaga iiga sheekayso. Horta liidatee?
Intii aad unkanayd waxaad ahayd noole faduul badan. Dulmigaagu waxa uu daday dusha dunida oo dhan. Waxaaba kasii daran xanuunkaaga, caafimaadkaaga, dhibtaada, faqrigaaga, fisqigaaga iyo fal walbaa ood samaysaa anaad igu lamaanisaa. Horta goormaan ku noqday kiish aad wax walba ku ridato?
Waan ogahay raadintayda inaad ku waallatay, se micna daridaadu wax walbay ku seejisay. Ma garan karo hadaad iheshid waxa aad iwaydiinaysid. Mana doonayo dibjirkaaga waalani, ee aan isagoon i arkin ka nasan la’ahay inaan hor fadhiisto. Horta saaqidsanidee?
Waxa aad dooontay si walbaa, inaad igu raali galiso. Jar walbaad iska laadlaadisay. Sidii juudaankii baad hilbo daliigtay, oo miyir la’aantaadii waxay ku tustay inaad nafta is dhaafiso. Horta yaa igaa soo been faray “fartiimay”?
Alla cajiibsanidee! Maskaxdaadan ay xuubku caarada dabooshay, maalina ma is waydiin wayday cidda aan ahay? Waxa iska kaaya galay? Iyo meesha aan ku kulanay toona? Maxaase inaga dhaxeeya maalina miyaysan ku odhan?
Haa waa runtaa oo adoo mar warqad ku qorayaan arkayay inaad mar iga shakisay, laakiin waan ka xumahay laanbaddii yarayd ee maankaga kaaga baxaysay qolyaa kaa shiiday “tuuryeeyay”, oo way kaa jabtay .
waxaasba waxa kasii khatarsan adigoo aniga i masabidanaya ayaa tiri wuu ila soo hadlay. intaad niman aanan shaahidkay i dhugan kutub u dhiibteen baad tiraahdeen inoo matala kuwo isaga ka yimid. Waxaaba ugu waali caddaa mid yiri caruurtaydaan kuu bireen horta axmaqsanaayaa kaasi?
Waakan xamaaligii carrabka waynaa, isna mus kasoo baxay. (Anitu waxaan ahay tii lasoo tiray. Tariic fiican baan tu tocdaa). kuwii caadiga ahaa baan la yaabanaa, ee maxa carrab wayne uska kaaya soo galay toloow? War carrabeeyow walaalow miyaadan isku xishoonayn? Markan adiga ku wakiilanayo ma kuwo hadalkoodu fasiix yahaan meeshaad ku noolayd ka waayay? Maxay ahayd qowmkan aad adigu ugu hadalka fasiixsanayd ee aan kaa doortay? Isku xishoo adigu balaayo carab ballaaran lahayd’e .
Kuwaasiba waxa aamus yiri mid dhiigaaye la yiraahdo sida uu ii masabitay isagaa idhalay buu meel walba la istaagay. Horta sideed dhiigaayoow adoon i sawiri karin aabbe kuugu noday? Sow maadan ahayn ninkii ay berigii xertiisu ku yiraahdeen ninkii ku dhalay cunno inooga keen?
Yaabay oo fajaacay. waakan aflowna godka isku soo xiray, deedna inta uu galgashay yiri kii maqnaa ba junuud inta uu igasoo adeejiyay i ceejiyay. Isagoo barooranaya waakan naagtii uu qabay dul kada loobsan. Naagtiisu kamaysan qasin waalidiisa ee inta ay how tiri bay mid kaloo aniga igu dawakhsan/waashay kala dul dhacday. Isna ismuunan dhibin ee inta uu hareeraha dhugtay kuye; taleefonkii dhiigaaye iyo carrabeey laga soo wacay baa lagaa soo missed call-gareeyay. Aflow lamaan yaabinee, waxa qosol igu dilay ninkii aniga iraadin jiray oo mid kale ku leh waa lagu soo wacay. Horta adaaba igu waashay ee maxaan adigaba kuu soo wici waayay xooloow, inta aan 40 jir ummi ah wacayo?
Aflow waakan waalidiisii wax yar un ay isugu daba dhacday. Sidii dhiigaaye iyo kuwii ka horeyay wa isagan waraaqo soo gurubsaday. Haye, balaayo afmaal ah buu ahaaye wa isagan curiyay gabayo oo u beri ay kuwo nafta u keeney uu isaga maslaxi jiray. waa isagan wax walba oo uu jeclaa yiri awooddii dhuumalaysan jirtay ee raadaarrada caqliga ka qarsoontay baa isoo fartay. Waxaan la yaabay sida uu galmada iyo bililiqada iigu bannaysan jiray. Maxaad nooloyahow falani umadda magacayga ugu xadgudubtay? Goormaanse caruurta fuul ku idhi?
Inkasta oo uu fariid ahaa waxa aan aad ugu taageray inuu xidhay masabidashadaydii, oo uu yiri anaa gunta soo xaalufiyay, gaadhkaasina cid xoqata anaa u danbeeya, hadana noolihii i masabitay kii ugu falnaa abid ayuu ahaa. Bal wali ma aragteen qof gus la dhex waregaya qowm dhan oo leh kaygu waa bilaa xad oo awooddii baa tiri mus walbaa gasho. Waxaan ka xumaady kii yaraa ee miskiinka ahaa sida aad qalanjadii uu calamaday uga dul qaaday oo aad anigaygan ii markhaati gashatay. Horta goormaan guskaaga wakiil ka noqday?
Waaliba waali bay ka darantahay noolahan yar ee wada falan iyaga iyo aniga goormaanu wax isku darsannay? Bal adiguna iiga waran waxa ay kugu sameenyeen dabayl waynoow?
Cajab taadu bikh bay noqon bowdya waynoow hadaan tayda kaaga sheekeeyo. Ileen anagaa taab aragnay.
Kuwa wax dilayay Allahu Akbar ayay lahaayeen, kuwa la dilayana Ashahaada ayee ku celcelinayeen. Kuwa wax dilaya warmaha musxafka qur'aanka ayaa u surnaa, kuwa la dilayana gaashaanka qur'aan baa ugu qornaa!
W/Q: Muxsin Jaamac 30th July 2019